Date My Pet » 7 Ny fahamarinana About Pet Tia
7 Ny fahamarinana About Pet Tia
Last nohavaozina: Nov. 30 2020 | 2 min namaky
Hividy ny biby no tena fiainana miovaova. Ary ho an'ny rehetra ireo biby tia avy any, fantatray fa afaka tena an'i Jeremia ny amin'ny fito eto ambany fahamarinana.
fahamarinana #1: “Pet High”
Pet tompony amin'ny ankapobeny matoky kokoa niafara tamin'ny ambony tena misy vidiny. Pets fitiavana tsy misy fepetra, Manao veloma amim-pifaliana, ary hanatanteraka ny filàna ny fankasitrahana, famoronana “Pet ambony”, izay toy ny biby tompony, fantatrareo fa ny fihetseham-po tsy azo nikapoka.
fahamarinana #2: More fanantenana amin'ny Fiainana
Rehefa mieritreritra momba ny biby fiompy, ianao tsy afaka ny tsy mitsiky sy mieritreritra ny rehetra ny fomba izay efa nitondra fifaliana eo amin'ny fiainanao. Na dia fotoana fa mafy toto, ny ora-maharitra hamihina sy milalao fotoam-pivoriana hanazava ny andro. Raha ny marina, rehefa mieritreritra momba ny biby, hevitry ny ratsy solafaka ny lasa sy ny positivity Mamirapiratra mandritra ny vatana.
fahamarinana #3: Lonely No More
Pets koa ny manome antsika amin'ny fahatsapana fa tafiditra sy hanome antsika fiainana manan-danja. Ny andraikitra sy ny sorona ilaina ny biby fananana no mendrika izany isika rehetra rehefa mahita sy mahatsapa ny tsy misy fepetra, nonjudgmental fampiononana izy ireo manome.
fahamarinana #4: Sokafy Mankany fiainana sy ny fifandraisana
The “Pet ambony” fa ny biby fiompy maneho amintsika manao hoe marefo tsy tena toy ny mampatahotra. Fa fantatsika fa na inona na inona mitranga, misy zavatra velona mizaka amintsika. Amin'ny alalan'ny biby fiompy’ be fitiavana sy ny firaiketam-po toetra, ny fiankinan-doha tena mampiseho antsika ny biby fiompy dia manome fanantenana fa fanokafana ny tena mendrika ny mety isaky ny.
fahamarinana #5: Finoana ny Soul Tokantrano Misy
Amin'ny alalan'ny kisendrasendra oroka ny am-pofoana-mipetraka izany fijery ny tahotra eo imasony, ny fitiavana tsy misy fepetra manome biby fiompy dia manome heviny vaovao ny teny hoe fanahy vady. Fa tia biby sy ny mpankafy, ny biby fiompy dia iray amin'ireo ny fanahinay vady. By azy ireo “fotsiny mahalala” rehefa mila fanampiny ny sasany tsara dia manamafy fa ny fanahinareo miresaka amin'izy samy izy. Io filazana fa ny biby fiompy hahatonga antsika misokatra kokoa sy tsirairay ny izany hevitra izany ny fanahy vady.
fahamarinana #6: In Touch amin'ny fihetseham-po
By fihetseham-po, izay tsy midika foana toy ny adaladala kely mitomany na fihetseham-po nitaredretra. Pets manome amin 'ny fiainantsika ny heviny lalina kokoa ny mamela antsika hahazo nifandray tamin'ny malemy, akaiky kokoa ny fihetseham-po. Izahay, tahaka ny biby fiompy, izay miavaka dia mafana fo kokoa sy afaka miharihary milaza ny eritreritsika sy ny fihetseham-po, tsy amin 'ny biby fiompy, fa ny hafa ihany koa.
fahamarinana #7: Pets ho avy aloha
Ny biby fiompy dia ny zanatsika. Avy foana ny miresaka momba azy ireo ny famonjena an'arivony ny biby sary ny mitondra azy ireo toy ny zazakely, ny fifandraisana misy eo amintsika sy ny biby fiompy dia tena mitovy ny an'ny ray aman-dreny ny ankizy.
5 Things ho Wingwoman ny Tsarovy
6 Soso-kevitra ara-potoana ho an'ny Manambady Smarter!
5 Jereo Points Fa Total fiarovana amin'ny Online Dating